Iifayile ze-THM kunye neekhamera zedijithali (ifoto okanye ividiyo) | Iindaba zeGajethi
AU-ntonio, umhlobo webhlog, undibuze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo malunga neefayile ezithile kwikhamera yakhe kwaye nekhompyuter yakhe khange ayazi. Iifayile ekuthethwa ngazo zinolwandiso "THM" ndingaziwa, ndiye ndenza uphando oluncinci kwiwebhu ndabona ukuba baninzi abantu ababuza ezi ntlobo zeefayile kodwa ulwazi olunokufumaneka ikakhulu ngesiNgesi. Ndiye ndagqiba kwelokuba ndikubhalele le post incinci malunga iifayile ezandisiweyo "THM".
LLe nto ayinayo imbali eninzi, xa urekhoda ividiyo, nokuba yeyifoto okanye ikhamera yevidiyo, umatshini wenza ifayile apho igcina khona imovie erekhodiweyo, oko kukuthi, yenza ifayile yevidiyo eya kuthi yongeze enye okanye enye ixhomekeke kwifomathi esebenzisa ikhamera, umzekelo ungafumana "my_video.avi", okanye "my_video.mvi", njl.
Pero ngelixa ikhamera idala le vidiyo, ikwadala ifayile enegama elifanayo kodwa kunye nolwandiso "THM", Oko kukuthi, ikhamera iya kwenza, umzekelo, iifayile «my_video.mvi» kunye «my_video.thm» . Eyokuqala yividiyo ngokwayo kunye nenye ifayile enokongezwa ".thm" yey ...
Iifayile ezandisiweyo "THM" ziifayile, ezixhomekeke kwikhamera, ezigcina ulwazi olwahlukeneyo, kubandakanya ulwazi ngomhla kunye nexesha lokurekhodwa, zikwasebenza njengezikhombisi (kungoko igama lazo, "THuMi-bnail ”ethetha" i-thumbnail ") esetyenziswe yikhamera ukubonisa umfanekiso orekhodwayo kunye nokwenza isantya sokubonisa sekhamera
BEwe, sele uyazi ukuba zeziphi iifayile ezinokongezwa "thm". Ukuqukumbela ndingathi ukuba udlulisa ividiyo ukusuka kwikhamera ukuya kwikhompyuter, wakube unayo kwikhompyuter yakho awuyi kuyidinga ifayile "my_video.thm" ngaphandle kokuba ufuna ukugcina ulwazi. Icebo lokwazi ukuba xa ucima ifayile uza kulahla naluphi na uhlobo lwedatha ebalulekileyo kuwe kukukopa kuphela ifayile "mi_video.mvi", okanye "mi_video.avi", kwaye ubone ukuba iboniswe ngokuchanekileyo, ukuba kunjalo , Sukuyinika ngaphezulu kwaye ushiye "my_video.thm" kwaye kuya kufuneka uyishiye kwividiyo okanye kwikhamera yemifanekiso ukuba uza kuyigcina apho.
ENdiyathemba ukuba ubucacisile ubumdaka kolu lwandiso kwaye kuyanceda ukuba wazi ukuba zeziphi iifayile onokuzigcina xa uhambisa iividiyo ukusuka kwikhamera uye kwikhompyuter.
PKuyinyani ukuba ayizizo zonke iikhamera ezenza ezi fayile ngolwandiso ".thm", ezinye Sony bayayenza kwaye Canon njengokuba. Ukongeza, ukuze ubone ulwandiso lwefayile kuya kufuneka ukhubaze ibhokisi ethi "Fihla iifayile ezongeziweyo zeefayile ezaziwayo". Ukuba akunjalo, ubuya kubona iifayile ezimbini ezinegama elifanayo "my_video" kodwa mhlawumbi ngeempawu ezahlukeneyo.
Ekuko konke. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iifayile ze-THM kunye neekhamera zedijithali (ifoto okanye ividiyo)
Iifayile zeviniga ezine .thm ulwandiso nazo ziyavela kwi-psp yam, ndingazicima kwaye ndiqhubeke ndibukele iividiyo?
Molo Veiden, ungazicima ngokufanelekileyo iifayile kunye nolwandiso lwe .thm kwi-psp yakho kwaye uya kuqhubeka nokubukela iividiyo. Inye kuphela into yokuba xa ucima i-thm awusayi kuphinda ubone umfanekiso ovele njenge-thumbnail yevidiyo yakho kwikhonsoli yakho. Ukubulisa.
Ndinekhamera yevidiyo kwaye kwikhompyuter yakho uyayibona ividiyo, kodwa xa uyirekhoda kwiDVD, uyibona ngokungabikho kwesantya kunye nokubi kancinci.Kutheni? Enkosi
Hola Javier Andinawo amava amaninzi ekuhleleni ividiyo, inokuba ubhale phantsi kwinkqubo ye-NTSC kwaye uyayibona kumabonwakude wakho osebenza kwi-PAL, khangela kuGoogle ngalo mbandela. Kwelinye icala, awungekhe urekhode ngenkqubo emnandi kakhulu, ngamanye amaxesha ukuba awusebenzisi irekhoda elungileyo enje, iikopi zilusizi.Yintoni inkqubo yokurekhoda oyisebenzisayo?
intombi eyi-guellal sitsho
Ndineevidiyo ezandisiweyo .mov kwaye andiziboni kwikhompyuter yam kodwa ndiyaziva ukuba ndisebenzisa ifayile yemidiya yeVLC (.mov) kodwa ukuba ndisebenzisa iWindows Media Player andiboni okanye ndive nto. Ndifakele isoftware yekhamera ye-olympus kodwa akukho nto. Andazi ukuba ndenzeni. Ngaba unalo uluvo lokuba ingaba yintoni ingxaki? Enkosi.
Enkosi umbulali weviniga. Into ekhawulezileyo isebenze kwaye ngoku ndiyakwazi ukubukela iividiyo. Kodwa ngoku ndinomnye umbuzo kuwe. Ndithengile ilaptop kwaye ndinayo ikhamera yewebhu yePhilips ToUcam kwaye kubonakala ngathi ayihambelani neWindows Vista kuba indinika impazamo xa ndiyifaka kwaye ikhompyuter indixelela ukuba kukho ukungangqinelani. Ngaba ikhona into oyaziyo malunga noku? Yintoni umqulu! Ngaba kuya kufuneka ndithenge ikhamera yewebhu entsha?
Enkosi Umbulali weVinegar!
Molo Virginia, wamkelekile, enkosi ngokundwendwela ibhlog. Ndiyoyika ukuba kuyakufuneka uthenge ikhamera entsha okanye ulinde umqhubi wekhamera yewebhu ehambelana nevista ukuba iphume. Akukho nenye yeekhamera ze-toUcam ezinalo mqhubi ngokokwazi kwam kwaye ndiyathandabuza ngokuqinisekileyo ukuba baya kuyikhupha. Kuyinzuzo ngakumbi kubo ukuba bathenge enye, ngethamsanqa. Konke okugqibelele.
Molweni iviniga. Ndiyabonga ngento yonke. Ndiyicinge kodwa bendifuna ukudibana nayo ngaphambi kokuthenga entsha. Ewe, akukho nto uqhubeka uyenza kakuhle. Utata ukhuphele uMthunywa ngokuhlala kunye nolwazi olukwiphepha lakho. Ungumntu okrelekrele!
Ndiza kuthetha nawe kungekudala. Konke okugqibelele.
Molo eVirginia, ndiyathemba ukuba uyaqhubeka undwendwela ibhlog kwaye uyincoma kubahlobo bakho. Konke okugqibelele.
Ewe ndinekhamera entsha ye-lumix, kwaye iyandigcina iividiyo endizenzayo kwifilimu ekhawulezileyo, umbuzo wam ngowokuba ndingakwazi na ukutshintsha ulwandiso ukuze ndikwazi ukusebenzisa ezo vidiyo zincinci kwiinkqubo ezinje ngemoviemaker ???
kulungile ndiyathemba ukuba yesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
enkosi nonke, uhambe kakuhle
Molo Killer Vinegar.
Umbuzo wam ulandelayo. Umhlobo undinike uthotho lweevidiyo kwifomathi yeHTM kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ndingaziguqulela njani kwenye ifomathi okanye yeyiphi inkqubo endinokuyenza.
Uxolo Mbulali, bendingalifundanga eli gqabaza lingasentla, ndiyaxolisa, kodwa amathandabuzo am sele esonjululwe;). Enkosi.
Imibuzo emikhulu, ubukhe wakwazi ukuyidlala loo vidiyo? Ukuba kunjalo, yeyiphi inkqubo? Umhlobo wakho uzifumene phi ezi vidiyo kwi-psp okanye kwikhamera? Uya kundixelela, ndifuna ukwazi ukuba nembono ecacileyo.
Ndiyibona njani ividiyo ene-THM eyandisiweyo? Ngaba kuya kufuneka ndikhuphele inkqubo? phi?
Iifayile zeDenisse ngolwandiso lwe-THM zizithonjana zokujonga kuqala ividiyo kwikhamera yakho kodwa ayizizo iividiyo. Iividiyo zigcinwa kunye nezi fayile kodwa ngolunye ulwandiso.
Molo umbulali weviniga ndiyakubulisa kwaye ndiyayixabisa yonke ingcaciso oyinikezelayo, ethi yona ikumgangatho ophakamileyo, ndiyakuxelela ndenza ushicilelo ngekhamera yam yakwa-Sony 6.0 kwaye ndinencwadana ene-windorwa vista basic, ndiyazibona iividiyo Ngumfanekiso lowo ngaphandle kweengxaki Kodwa kutheni ndingenakuva ukudlalwa kwakhona, isandi, umculo, iincoko? Ngaba ungandinceda nceda? Ndidinga ukukhuphela kunye nemifanekiso kwaye ndivakalise iividiyo endinazo.
Enkosi kwangaphambili ngalo lonke uncedo lwakho.
Molo Aly, kunzima kakhulu kum ukuba ndiqikelele ukuba yintoni ingxaki yakho. Ndicinga ukuba unokuva i-odiyo kwikhamera, akunjalo?
Ukukhaba kwebhola sitsho
Molweni nonke, ngubani owaziyo ukuba kutheni ikhompyuter yam ingayazi iDVD-R yam encinci? Ngamanye amagama, ndifuna ukuzihlela kwikhompyuter kodwa ayiziboni.Ngaba andikayigqibi i-mini-DVD kwaye ndingayenza njani? Enkosi ukubulisa
I-Flying Kick yemibuzo engahambelani nenqaku isebenzisa iposi. Konke okugqibelele.
Kulungile ... Ndinengxaki efanayo noAlicia, ndinekhamera yakwaSony endirekhode ngayo ezinye iividiyo kwaye xa ndizidlulisela kwincwadana enewindows vista ndibona kuphela imifanekiso kwaye andisiva isandi, nangona kunjalo kumatshini ngewindows xp, akukho ngxaki. Ukuba ndifuna ukubona ividiyo ngqo. Ukuqhagamshela ikhamera kwikhompyuter nge-usb, indixelela ukuba ayinazo iikhowudi eziyimfuneko zokwenza njalo, ngaba iya kuba yingxaki ngeewindows vista? Iifayile zekhamera zeSony enye .avi kunye nenye .thm. Ndiyabonga ngento yonke
UMonica andina windows windows efakiweyo kwaye andinakukunceda kakhulu. Ekuphela kwento endinokukuxelela yona kukuba kukho inani lezixhobo ezingaziwayo yiVista, ikhamera yakho inokuba yenye yazo. Jonga ukuba umntu one-Vista efakiweyo ufunda eli nqaku kwaye unokukunceda. Konke okugqibelele.
enkosi, ulwazi olukhawulezayo nolusebenzayo
Molo, uyazi, ndinengxaki kwaye ndinazo iividiyo kwifomathi ye-thm, ndiziguqula njani ziye kwi-avi okanye kwi-flash okanye nayiphi na enye inkqubo, yeyiphi inkqubo enokuyikhuphela ukuyiguqula, kwaye ukuba ungandinika iphepha lewebhu apho ndingalifumana khona, ndingalixabisa kakhulu
UJack ufunda inqaku, ayizizo iividiyo, zizithonjana.
Ndinayo iseli yakwaSonyericsson W810i, imixholo eyimifanekiso inokwandiswa kwe-THM, ndiyikhuphele kwiphepha leSonyericsson kwaye ndiyayibona kuphela kwiSeli, ngokufanayo neevidiyo endizifotayo ezinokwandiswa kwe-3GP, njengoko ndinako ukuzibona kwikhompyuter, kuba ndinokwaneleyo, ndingavuya kakhulu ukuba uyandinceda, ngokunyanisekileyo uJoseph Rivera M
Sawubona iviniga ndingathanda ukwazi into, ndibhale ezinye iividiyo kwikhamera yeSony, zikhangeleka zilungile kumabonwakude xa zixhunyiwe kwikhamera ukuya kwiTV. Xa ndigqithisela iividiyo kwikhompyuter yam, kuphela abanye bathi iMPEG yeVidiyo kwaye abanye baphuma njengeFayile ye-THM. Andikwazi ukuvelisa ii-THMs ... ndingazenza njani kwakhona? Kwaye kutheni oko kusenzeka ukuba abanye bagcinwe njengeVidiyo ye-MPEG kwaye abanye babe yiFM File ??? ENKOSI :) kwaye ndiyaxolisa ukuba sele bewubuzile umbuzo kwaye sele uwuphendulile.: $
UJose kufuneka usebenzise isiguquli okanye umdlali weefayile zeDVD. Ndiza kubona ukuba ndifumana nayiphi na kwaye mhlawumbi ndenze isifundo kuyo.
inyibiba awulifundanga inqaku. Ukuba uyakwenza oko, uya kwazi ukuba iifayile ongenakudlala ngazo yimifanekiso (iithonjana) hayi iividiyo. Konke okugqibelele.
UVictoria Hernandez sitsho
Hi Vinegar… abantu abaninzi babuzile malunga neefayile ze-THM ezinxulumene nesony. Ingxaki yam kukuba ndineevidiyo ezininzi ezirekhodwe kwikhamera kwaye xa ndizama ukuzidlulisela kwilaptop yam yenzeka kuphela kwifomathi ye-THM kwaye ayikho kwi-avi. Oku kuyenzeka kum okokuqala kwaye andinalwazi lokuba iya kuba yinto evela kwikhamera okanye into enjalo, ukuba ungandinceda ndingayixabisa kakhulu.
Njani ngeviniga, ndinombuzo malunga nezi vidiyo. Ndine sony dsc-w55 kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ngaba ikhona inkqubo eguqula iividiyo (ezingathathwanga yile khamera) ukuze zikwazi ukuzibona kuyo. Ngamanye amagama, ndingathi ngandlela thile ndisebenzise ikhamera njengesidlali sevidiyo.
UVictoria mhlawumbi uyimpazamo yakho xa uhambisa iifayile kwi-camcorder yakho. Funda incwadana yemigaqo kakuhle okanye uye evenkileni uchazelwe yona.
Ndiyawuqonda umbuzo wakho uRamiro kodwa ngaphandle kokuba ikhamera yakho izise idiski kunye nesoftware eyimfuneko andazi nayiphi na inkqubo eyenzayo.
Molo umbulali weviniga ndilixhoba leefomathi endicinga ngazo, kulungile umbuzo wam uhamba ngoluhlobo kuvela ukuba ndinekhamera yevidiyo yesony kwikhompyuter akukho ngxaki ukuzibona iividiyo kodwa xa ndizitshisa ukuze ndizibone I-DVD ndibona kuphela imifanekiso kodwa andiyiva isandi, inyani kukuba, andazi ukuba ndenza into engalunganga, ndifanele ndiyitshise njani?
JUCER86 akunakwenzeka ukuba ndiyazi into oyenzayo engalunganga. Zama ukufumana iqonga apho bathetha khona ngekhamera yakho kwaye ulandele amanyathelo okurekhoda abawabonisayo.
Sawubona iviniga ndinophawu lwelaptop lwe-HP imodeli dv2615nr enekhamera kunye nemakrofoni edityanisiweyo kodwa into embi kukuba xa ndidibanisa nomthunywa, amaxesha amaninzi andifuni kuvula ikhamera kwaye andazi ukuba mandithini yenza malunga nayo.
Ndiyathemba ukuba ungandinceda…. Ndiyabulela kakhulu!!
Kulungile wonke umntu enkosi kakhulu ngokuzama ukundinceda !!!
Sihlala sinxibelelana, ndiyithanda kakhulu iBhlog.
U-Adrian andikaze ndisebenzise i-webcam, abayitsali ngokwenene, andazi ukuba kwenzeka ntoni kuwe. Ndiyathemba ukuba umntu ofunda uluvo lwakho unokukunika impendulo.
Kulungile uAdrian 😉
Ewe ndingathanda ukwazi ukuba kuyenzeka na ukuba yenze ifayile ye-thm yevidiyo endinayo kwikhompyuter yam kwaye ndiyigcine kwikhamera yam yedijithali ye-canon kunye nevidiyo kwaye inokuphinda iveliswe ngamanye amagama ukuba ungasebenzisa ikhamera yedijithali enje nge-mp4 edala ifayili ye-thm ehamba nayo ukusuka kwividiyo yoqobo yerekhodi yokuba ividiyo ayibhalwanga ngekhamera kodwa yahlelwa kwikhompyuter kwaye ndifuna ukuyibona kwikhamera impendulo pleaseeeeeee
Ifayile ye-thm sisithonjana nje, ayizukuyenza le nto uyifunayo.
NDIFUMANELE IMEYILE KUMHLOBO ONEVIDIYO ENGINOMDLA WOKUBA NOKUVUMELEKA…. UNGANDINCEDA NJANI UVINEGRE KILLER…. ???
KUBALULEKE KAKHULU KUM UKUZE NDikwazi UKUKHANGISA LE VIDIYO NDINGANAKUYIVULA, NGABA KUZA KUBA NENKQUBO EYODWA ???
I-DIVX, ungavula naluphi na uhlobo lwefomathi yevidiyo, le yifomathi yevidiyo ecinezelweyo esekwe kwimigangatho ye-MPEG-4, le fomathi yeyokucaca okuphezulu kufutshane neDVD, esi sidlali sinokukhutshelwa kwiphepha http://www.divx.com Apho unokukhuphela inkqubo kwaye ungaqhuba naluphi na uhlobo lwefomathi
UMaría José, umhlobo uPoder Supremo ukunike isisombululo esifanelekileyo. Khuphela umdlali kwaye uzame. Enkosi PS ngegalelo lakho.
Molo Vinegar kunye nenkampani.
I-Memeto kumsonto wakho ukukwazisa ukuba kukho iifayile enye yokuhlaziya i-firmware yabadlali be-dvd ye-Thomson abanokongezwa .thm (kufuneka ngenxa yokufana kwamagama: .thm - thomson) kwaye nangona ingabalulekanga ndiyakwazisa. .
SILVIO MONTENEGRO sitsho
MHOLO. Ndizimisele ukuphanda ukuba zeziphi iifayile zeMovxxxx.HTM kwaye emva kokuzama izandiso ezininzi, ndiye ndaqonda ukuba ukuba utshintshela kwi-mov1234.jpg, izakubonisa umfanekiso wokuqala wevidiyo ohambelana nolwandiso lwe-mov1234.avi. Ngamanye amagama, ndigqiba kwelokuba iikhamera ezifana neyam (i-Sony Cyber-shot) zisebenzisa le fayile ukukubonisa umfanekiso omileyo kumboniso wekhamera, ukuze ikunike umbono wevidiyo, ngaphambi kokuba uyidlale.
Ingxaki yam iyafana neyeAlicia
Ndirekhoda iiVidiyo ngekhamera yam yakwaSony
Ngqo kwi-dvd andikwazi ukuyidlala kuba ayiziboni
Ke isisombululo sakho besisithini,
Khuphela ividiyo kwi-pc ukubona ukuba ndingazidlala na
Ividiyo iqulethe iiFayile ezi-2,
Enye eyi-avi kunye nenye i-THM
Ndilayisha umdlali wam ifayile, avi, kwaye idlala
ividiyo kodwa akukho sandi siviweyo, bendicinga ukuba yile fayile
I-THM yayisisandi, kodwa le nto ndiyifundileyo kwinqaku, ayisiyiyo
Iya kuba yintoni ingxaki?
Ukuba ungandinika naluphi na uncedo, ndingaluvuyela kakhulu
Ndine Windos Xp, pack pack 2, »kwi colosus»
kwaye ndikhuphele yonke iCodec, nangaphezulu, iiwindows zam ziyasebenza
njengeyantlandlolo nangona ingeyiyo, ke ii-winods zithetha mna
khuphela ngokuthe ngqo zonke iikhowudi ezifunekayo ukuze uhlaziye
umgudu, kodwa akukho nto isandi
Ndifuna ukuguqula ifayile ye-thm ukuya kwi-mpeg
kuba ndifuna ukuyilayisha kwi-youtube kwaye ayizukundivumela
@Silvio enkosi ngolwazi.
Sawubona iviniga, ucinga ntoni ngamaxesha akhawulezileyo 6.3 kwaye ukuba ndingayikhuphela kwi-intanethi simahla okanye yeyiphi endinokuyikhuphela simahla kwaye undicebise kuba ndingathanda ukubona iifayile ze-3gp kwaye ukuba unokubabona ngexesha elikhawulezayo
@Napoles ungayikhuphela le nguqulo yasimahla kwiSoftonic.com kwaye iya kwenza le nto uyifunayo.
molo ,, ndineevidiyo ezivela kwikhamera yesony eya kwi-pc kodwa i-windows media player ifunda ezinye kwaye ezinye azenzi ,,. ndizibona njani.
Molo ndine-sony t70 kwaye ndingathanda ukudlulisa imovie ukusuka kwikhompyuter ukuya kwikhamera ukuze ndibabone kuyo kodwa xa ndibadlula ikhamera ayibazi njengakudala ukuze idlalwe ???? Enkosi kakhulu kwangaphambili :::: kuyangxamiseka! !!!!
molo iviniga yokubulala, okwenzekayo kukuba andinako ukuvelisa iividiyo ngolwandiso lwe .thm kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ndingazitshintsha njani okanye ndizilungise njani ukuze zikwazi ukuzala kwakhona. Enkosi
UXOLO NGOMBUZO, ANDIZI UKUBA UBUYA NGOKU BABE NDIMENYELELA UMXHOLO NGE-LG MG800, KUNYE NOKWANDISWA KWABO, KODWA AKUNAKUDLALWA, BANDITHUMELELE NGE-BLUETOOTH SONY KODWA ANDINAKUZALELA INTO ENDIYENZAYO
molo umbulali weviniga ,, ndingathanda ukwazi ukuba ndingenza njani ukubona iividiyo zam kwi-pc yam umfanekiso ongenanto uphuma ndingathanda ukwazi ukuba ungayibona njani okanye yeyiphi inkqubo enokubonwa
apho ukhuphela khona ulwandiso lwe-THM. ukuze ndikwazi ukukhuphela imixholo kwiselula yam yesony.
molo umbulali weviniga, ndinekhamera yeCanon 550A, erekhoda ezinye iividiyo, kwaye ndifuna ukuzenza kwakhona kwiDVD yam (efunda iDivx) ekufuneka ndiyenzile ukuze ndikwazi ukuzibona; ifomathi yezi fayile zii-MVI.
Hayi ndi-ek em shit lo mama, dlulisa ezinye iividiyo kwi-pc yam kwaye ezinye ziya kuyazi kwaye ezinye aziyi kuyivula, zivela kwi-thm kwaye umlamli wam uthi applaye rk eno uyabaqonda ukuba bangayenza le averlso porke osn ividiyo Ibaluleke kakhulu kum, iihagu eunos ukuba ndizokwazi ukuba yinto eqhelekileyo kwaye ayitsho ukuba zi thm Ndifuna ukwazi ndifuna ngokungxamisekileyo ukuba ndingazivula njani nceda ukuba umntu othile uyazi diageme enkosi
Enkosi kakhulu ngolu lwazi luxabisekileyo, ndiyamangaliswa kukuba kukho abantu abanceda abanye abantu kwizinto eziluncedo.
Ndingathanda ukuba undincede kwingxaki endinayo.
Isizathu kukuba bendineevidiyo ezigcinwe kwi-pc yam kwaye andazi ukuba kutheni okanye ngubani ocime iividiyo ezazikwi -mpg kwaye endishiyele yona .thm yevidiyo nganye, ngaba iividiyo zinokuhlangulwa?
Enkosi Vinagre Asesino, undigcinele ukubandezeleka okukhulu kuba bendingazi ukuba yintoni le malunga neefayile zokupheliswa kwe-THM, ucacile kwiingcebiso zakho, ungayeki ukwenza ubomi bube lula kwabanye, Imibuliso !!!!! !!
Ndiyathemba ukuba ungandinceda kwaye undixelele indlela yokukhuphela (ukurekhoda kwikhompyuter yam) iividiyo zeYouTube, ngaphandle kokudityaniswa ngalo lonke ixesha ndifuna ukuzidlala, kuba zikhona iividiyo zemfundo endifuna ukuzidlulisa kwiintetho ezikhuthazayo nezifundisayo.
I-Myriam isebenzisa inkqubo yokubuyisa ifayile ecinyiweyo kwaye isebenzisa amagama efayile ye-thm ukukhangela iividiyo.
UVictor ukhangela i-softonic ye «download youtube» kwaye uya kubona ukuba kulula kangakanani.
Molo Vinagreasesino, andifuni ukukubuza nantoni na, kuba sele ndicacisile ukungathandabuzeki kwam okukhulu malunga neefayile ze-THM, indlela ekukuhle ngayo ukufumana ibhlog yakho, ndiyakuhalalisela, KUGQWESILE, usebenza kakuhle kwaye unomonde, uninzi imibuliso!
Igama Jordi sitsho
Molo mbulali weviniga
Ndinekhamera yesony erekhoda iividiyo ngefomathi (.mpeg) kwaye ndiyidlulisile ifilimu enefomathi (.mpeg) ukuze kamva ndiyibukele kumabonwakude kodwa ikhamera ayiyiboni.
Jordi, uya kwimuvi kwaye emva koko ufuna ukubona imovie kwikhamera okanye kwiTV?
Ndifuna ukubona imovie kumabonwakude kodwa ngekhamera ngentambo endinayo. Ndiyidlulisile ifilimu ndaya kwikhamera kwi (.mpeg) kodwa ngaphandle kwefayile kwi (.thm).
Jordi malunga nefayile ye-THM ayinamsebenzi, ingxaki kukuba uguquko aluzukuhambelana nefomathi yangaphakathi efundwa yikhamera yakho kwaye andicingi ukuba kulula ukufumana le nto uyifunayo.
QAPHELA UKUBA KWI-FUPI YAM IIFAYILI EZINOKWANDISWA KWABO AZIZIBONI…. NJENGOKO NDENZA UKUZE NDIBABONE, KUNYE NOKUBA I "SMOV" ZIYAFAYELA EZI KUPHELA ZIZALE ISANDULELO HAYI UMFANEKISO ... NDIXELELE INDLELA ENDIYENZA NGAYO, NGENXA YOKUBA UKUNGAZI KWAM AKUNIKEZI OKUNGAKUMBI… .JIJI
UCarmelita ufaka ezi codec:
Mholweni ah enkosi ngokundinika lonke olo lwazi liphezulu kakhulu
Ndinekhamera ye-sony dsc-p200, ndingayidlulisa njani ividiyo endiyikhuphele kwi-intanethi
Igama loqhagamshelwano Kurodo sitsho
Inkqubo yeselfowuni kwi-intanethi indazisa ngezihloko endizisebenzisayo kodwa ndifuna ifayile ye-THM kwaye andazi ukuba ndingafumana phi okanye ndenze ntoni kuba ikhamera yam okanye iselfowuni ayinazo ezo fayile okanye ubuncinci andizenzi yazi nge ...
Sawubona iviniga, uyazi ukuba ndinexesha ndisebenza kwividiyo yasekhaya, kwaye umntu othile undibuze ukuba ndidlulise ividiyo ebenayo kwikhompyuter kwimemori yekhamera yakhe yedijithali (DSC-S700 Sony) kodwa kwikhamera ayinakudlalwa, Ndingayivuyela nayiphi na ingcebiso
Ndinombuzo ofanayo noka Ever Jimenez, ndingaphinda ndivelise iividiyo ezilayishwe kwimemori yekhamera yedijithali?
UKurodo akayazi ukuba ubuza ntoni.
I-davo ezo ziingxaki zokuhambelana nefayile, ukuba ikhamera yakho ayizanga nenkqubo yokuguqula eyona nto iqhelekileyo kukuba ayizukuyifundela ngaphandle kokuba ufumana ifomathi efanelekileyo.
Sawubona umbulali weviniga, ibhlog yakho inolwazi kakhulu.
Into efanayo iyenzeka kum nakuRamiro nakwabanye abaninzi. Ngeli xesha ngekhe uve ngenkqubo eyenza i .THM ukuze iividiyo ezingarekhodwa nesony w55 zibonakale kuyo.
IVinagreeee kwiminyaka emi-4 eyadlulayo ukuba ndathenga ikhamera ebiza kakhulu .. kwaye kude kube ngoku andikhange ndibone nayiphi na ividiyo kwikhompyuter (kuba ndingazi ukuba i-THM ayinakuvulwa kwikhompyuter)
Ndiyabulela kakhulu! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassass !!
Ngoku ndichitha iintsuku zam ukurekhoda ii-xorradas haha ​​😀
Mnumzana, iinkcukacha ozibonisayo ngalo mbandela zibonakala zibonisa kakhulu, ndiyawuqonda lo mbandela kodwa umbuzo wam kukuba uzihlela njani ezi THMs !!! Makhe ndichaze: NdinePSP kwaye sele ndiguqulile iividiyo ezininzi zasekhaya zaba yi-mp4. Inkqubo endibabeka kuyo ivelisa i-THM kodwa kuphela ngumfanekiso obonakala umnyama kwaye isihloko sibonakala kum njenge- «movie 1, 2, 3 ...» eyona nto ndiyifunayo kukuba umfanekiso omele loo vidiyo uvele kwaye tshintsha isihloko. Ndiyathemba ukuba ungandinceda. Ndiyabulela kwangaphambili ngegalelo lakho elingathethekiyo.
URaul ndicinga ukuba xa uthatha umfanekiso wefayile .jpg kwaye uyiqamba igama kwakhona .thm iya kukusebenzela ngokuthe ngqo. Yizame undixelele.
Enkosi ngempendulo yakho ekhawulezileyo! Ewe ndenze umfanekiso-skrini wexesha elikhawulezayo, ndiyisebenzisile kumhleli wefoto ukwenza i-jpg ye-160 x 120 pixels kwaye ekugqibeleni ndiyigcinile nge «.THM» kwaye kunye nevidiyo ndiyidlulisile kwiPSP. Ngoku ndiyayibona i icon yevidiyo njengoko bendifuna ijongeke !!! Enkosi! 😉
Molo mhlobo, ukubulisa, ndiyathemba ukuba ungandinceda, ingxaki kukuba ndikhuphele ezinye iividiyo kwikhamera yedijithali ukuya kwi-pc yam kwaye ndizama ukuzifaka kuYouTube emva koko kubonakala ngathi iyayilayisha kodwa ichitha iiyure apho kwaye xa emva kweeyure ezininzi kuvela impazamo njengoko iphepha lingekafumaneki, ungandinceda ngaloo nto, mhlawumbi ayisiyondlela onokuyilayisha okanye inzima kakhulu.Ndicela undincede, enkosi nemibuliso….
@Raul Ndonwabile ukwazi ukuba bekusebenzele 🙂
@Mirada Kuya kufuneka ubunciphise ubungakanani ngaphambi kokuzilayisha.
Molweni iviniga !!!
Ndinamathandabuzo malunga nolwandiso, kuba ndineefayile endizigcinileyo, ezidluliselwe kwikhamera zaya kwi-pc yam kwakudala kwaye inye kuphela, akukho 2 njengoko ubutshilo, ingxaki apha kukuba andinakuyivelisa nayo Isidlali semithombo yeendaba, ndingazibukela njani iividiyo zam? Ngaba unokukhuphela nayiphi na inkqubo?
Nceda undincede !!!
Ifayile yi-HTM xa kunokwenzeka kubekho ukuthandabuza
Okokuqala, Enkosi !!!
Beydi ukuba yi-HTM andinalwazi lokuba yintoni, ngoku ukuba yimpazamo yokuchwetheza kwaye ubufuna ukuthi THM endaweni ye-HTM ezi fayile yimifanekiso kuphela kwaye uya kuyibona kwikhamera yakho, i-psp, njl.
Molweni ndinengxaki. Ndirekhode ezinye iividiyo ngekhamera yam yeCanon, kwaye ndizitshintshele kwikhompyuter. Njengoko ikhompyuter ingadingi ukuba thm ndizicime. Ngoku ndingathanda ukugqithisa ezinye zeevidiyo kwikhamera, kwaye xa ndenza njalo, azibonwa njengoko ndingenayo i-thm. Ngaba ndingazenza ngandlela thile ezo thm ndizilahlekileyo? Ndiyabulela kakhulu.
Molo Vinegar kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndifumene iSony Ericsson W200i kwaye ndiyakuthanda ukuhambisa ii-mobiles, hehe, ukutshintsha imixholo, njl. kodwa ngalo lonke ixesha ndikhuphela enye yeefayile zemixholo zikwifomathi ye-THM kwaye ayizukundazisa ukuba ndingenza ntoni?
@Jani funda amagqabantshintshi kaRaul aphakame kancinci kwaye uyabona ukuba impendulo yam iyamsebenzela.
@Ledicia zama ukuzifaka ngenkqubo eza neselfowuni yakho, andicingi ngayo nayiphi na enye into.
Molo ndingathanda ukuba ungandinceda kwingxaki endinayo.
Kuyavela ukuba ndinekhamera ye-cyber-shot kunye nevidiyo endiyirekhodileyo andikwazi ukuyibona kwikhompyuter yam kuba yi-htm.
ndingayibona njani kwikhompyuter yam ukuba umntu angandixelela ukuba ndiyenza njani ndingayixabisa.
Enkosi kakhulu ngolwazi lwe-genius!
Iviniga ethandekayo, ndirekhode iividiyo zokuhamba kunye nezinye izinto zomculo kwifomathi ye-jpg emva koko ngesiguquli ndaziguqula zaba yi-mp4 ndazigqithisela kwiselfowuni yam (sony mp4 player enescreen) kodwa xa ndifuna ukubukela iividiyo ikhusi libonakala limnyama kwaye Ndiva kuphela isandi ... ngaba uya kuba nalo uluvo lokuba ungayilungisa njani? Enkosi kwangaphambili kwelinye icala lehlabathi …….
Kuthekani ngeviniga, okokuqala ndibhala kwibhlog ... Ndidlulise iividiyo ukusuka kwiselfowuni yam ndisiya kwi-PC yam, ngolwandiso lwe-3gp, kwaye bendifuna ukuziguqula, ifolda yam endiya kuyo ibifana nefolda yam yomthombo (I kuthetha ukuba, bendifuna ukuba iividiyo ziguqulwe kwifolda efanayo neevidiyo zantlandlolo), kodwa ukufa… endaweni yokuguqula inkqubo bayicime !!!!
Ndizamile ukutshintsha idilesi yolawulo lwendawo ekuya kuyo kwaye ukuba ndiguqulile ndagcina ividiyo yoqobo kwifolda yayo kwaye yonke into ilungile, ividiyo entsha iya kuvela kwifolda entsha. Kodwa into kukuba ndilahlekile iividiyo ezinomthombo kunye neefolda zokuya.
Ingxaki kukuba azicinywanga iifayile okanye zibuyiselwe endaweni yazo, zanyamalala ...
Wakhe wayiva lento? Ukudlala itoyi ...
Enkosi ngoncedo lwakho ... ukuba akunjalo banokuphinda babuye, ubuncinci enkosi ngenduduzo yakho ...
Wena gil qliao I knew enough ... wena iphepha
JR ndingacebisa kuphela ukuba usebenzise isixhobo sokubuyisa ifayile kwaye usithandazele ngethamsanqa. Ewe kunjalo, eyona nto inokwenzeka kukuba zibhalwe ngaphezulu, okukhona uthatha ixesha elide ukuzisebenzisa, mancinci amathuba okuba uphinde uzifumane.
molo, ndirekhode iividiyo kwikhamera yam encinci ye-dvd ,, kwaye xa ndizibeka kwi-pc yam ,,, ibona idiski engenanto ,,, ndincede
Ndinengxaki ... ndiye e-mall nabanye abahlobo bam sarekhoda iividiyo ezininzi kwaye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bandithumele zona kodwa andibaboni babendithumelela iividiyo ngefomathi ye-THM
Ndingenza ntoni ukuze ndibabone?
Gatonejo ™ sitsho
Kulungile, ukuphawula kwakho kuluncedo kakhulu, ukubingelela okuvela eMexico
kwikhamera yam sony-shot-shot ndinememori eyandisiweyo kodwa ndiyayivula ikhamera kwaye ifumana impazamo yefomathi kodwa ngaphandle kwe-chip ayiphumeli, ndingenza ntoni?
ndicela undincede ndibulale iviniga
TulaWith Pacemaker sitsho
Ndidinga impendulo kumbuzo kaHERNAN!
«Ndilayisha ifayile, avi, kumdlali wam kwaye ivelise kwakhona
Iya kuba yintoni ingxaki? »
I-TulaConMarcapasos ngokuqinisekileyo ingxaki iya kuba kukungabikho kwabaqhubi kwikhompyuter yakho okanye uguquko olubi.
Molo Assassin, ingxaki yam yile, yokuba ndigqithise iividiyo zasekhaya ukusuka kwikhamera yePanasonic ukuya kwiwindows ezenza imovie, ABABONISI umhla okanye ixesha, badlula kakuhle (isandi nesandi), kodwa oku kungasentla yingxaki .. Enkosi Uncedo lwakho. 🙁
IVelorio kufuneka ibekho kuba ayidityaniswanga kurekhodisho, ukuba kunjalo ndicinga ukuba akusekho lula ukuyilungisa 🙁
Uxolo yeyiphi inkqubo endinokuyiguqula ividiyo ethile ukuze ndiyibone kwikhamera yedijithali ye-canon
ndinemathandabuzo alandelayo. Ukusuka kwinto endiyifundileyo ukuza kuthi ga ngoku, uninzi lwazo lunengxaki efanayo nam kodwa ngomnye umatshini (uhlala eyiSony), kukuba xa berekhoda ngomatshini wefoto kwaye bayigqithisela kwikhompyuter baphulukana nesandi. Okundishiya ndithandabuza ukuba ngumatshini wam (olympus x-760) okanye ngaba yingxaki ethile yekhowudi. Ukuba kukho into oyaziyo undazise kuba ndineevidiyo ezimbalwa endifuna ukuziva.
imibuliso, ibhlog elungileyo kakhulu
Ewe ndithetha ukuba xa berekhoda ividiyo ngekhamera. Ndiyacacisa ukuze ingaziboleki ukuba ibambe.
Ewe, andinalwazi lokuba yintoni ingxaki ye-pehuenzo. Uxolo.